चट्टानी पहाडहरु को यात्रा | यात्रा समाचार
चट्टानी पहाडहरूमा यात्रा
मारिएला क्यारिल | | Ecotourism, संयुक्त राज्य अमेरिका
तिनीहरू एन्डिज वा आल्प्स जत्तिकै प्रसिद्ध छैनन्, न त भव्य रूपमा, तर निश्चय पनि सिनेमा र टिभीको विश्वले उनीहरूलाई लोकप्रिय बनाएको छ। म कुरा गर्छु चट्टानी पहाडहरू जो भित्र छन् उत्तर अमेरिका।
को रकी पहाडहरू तिनीहरू संयुक्त राज्य र क्यानडाका हुन् र विश्वको यस भागमा धेरै लोकप्रिय पैदल यात्रा र प्रकृति गन्तव्य हुन्। आज तिनीहरू यसका अंश हुन् कोकीराडो राज्यमा रकी माउन्टेन्स नेश्नल पार्क।
1 चट्टानी पहाडहरू
2 रकी माउन्टेन नेश्नल पार्क
यो एक छ हिमाल श्रृंखला प्रणाली जुन पश्चिमी तटमा समानन्तर रूपमा जान्छ र छ El,4401०१ मिटर अग्लो माथि माउन्ट एल्बर्टra ती लाखौं वर्ष पहिले गठन गरिएको थियो, यो क्वाटरनरी युगको हिमनदीय वातावरण र वायुमण्डलको क्षय र ज्वालामुखी गतिविधिबाट प्रभावित भएको छ।
युरोपियन उपनिवेशवादीको आगमन हुनु अघि तिनीहरू थिए र अझै पनि थिए अमेरिकी भारतीय जनताको घरजस्तो चेयेन्ने, the अपाचे वा होx, केहि केहि नामको लागि। यहाँ तिनीहरूले बाइसन र म्यामोथ्सको शिकार गरे। युरोपियन अन्वेषकहरूको हतियार, पशुहरू जस्तै घोडा र विभिन्न संक्रामक रोगहरू सहितको आगमनले यी व्यक्तिको वास्तविकतालाई ठूलो परिवर्तन गर्‍यो।
१ Rock औं शताब्दीको उत्तरार्ध र १ th औं शताब्दीको बीचमा रकी पर्वतहरू गम्भिर रूपमा वैज्ञानिक रूपमा अध्ययन गरिएको थियो। मुख्यतया सुनले लुकाउँछ र खनिजले उनीहरूलाई उत्प्रेरित गर्छ, र विभिन्न बस्तीहरूको लागि उही गणनाहरू जुन त्यसबेलादेखि देखा पर्‍यो।
रकी माउन्टेन नेश्नल पार्क
यो संरक्षित क्षेत्र १ 1915 १। मा स्थापित भयो र यसको एक विस्तार छ .1.076.। वर्ग किलोमिटर। त्यहाँ एउटा पूर्वी भाग र पश्चिमी भाग र दुबै भागहरू फरक छन्। जबकि पूर्व धेरै हिमनदीहरू भन्दा सुक्खा छ, पछिल्लो बरसात र चिसो छ, जसले धेरै घने जंगलहरूको बृद्धिलाई अनुमति दिएको छ।
पार्क भित्र त्यहाँ करीव pe० चुचुराहरू 60, 3.700,०० मिटर भन्दा अग्लो र १ 150० शरीर पानी छन् बिभिन्न आकारको। उचाईमा सब भन्दा कम क्षेत्रहरू छन् घासका मैदान र वनहरू पाइन्स र एफआईआरको साथ, तर हामी चढ्यौं sublpine जंगल र यदि हामी पहिले नै 3500 XNUMX०० मिटर भन्दा बढि उचाईको बारेमा कुरा गर्दैछौं भने त्यहाँ रूखहरू छैनन् र अल्पाइन घासको मैदान.
पार्क भ्रमण गर्न उत्तम समय गर्मीमा होजुलाई र अगस्ट बीचमा, किनकि यो लगभग º० डिग्री सेल्सियस छ, जबकि रातहरू अझै चिसो छ। यो अक्टुबर र मई को अन्त्य बीचको घाँस। पार्क दिनभरि २ 24 घण्टा खुला रहन्छ, विशेष विशेष मितिहरू बाहेक वेबसाइटमा जाँच गरिनु पर्छ, र त्यहाँ विभिन्न प्रकारका टिकटहरू छन् आगन्तुकका लागि:
प्रति व्यक्ति १ दिन पास: $ १।
Person दिन प्रति व्यक्ति प्रति व्यक्ति: $ २०
त्यहाँ १ vehicles भन्दा कम व्यक्तिको सवारी साधनको लागि वा मोटरसाइकलबाट आइपुगेका व्यक्तिहरूका लागि पनि टिकटहरू छन्। को अल्पाइन आगन्तुक केन्द्र यो राम्रो ठाउँ हो, पार्कको उच्चतम बिन्दुमा 3.595 meters meters meters मिटर उचाइमा, हिमनदी उपत्यका र चुचुरोहरूको उत्कृष्ट दृश्यहरू सहित। थप रूपमा, यसले स्थानको बारेमा धेरै जानकारी प्रदान गर्दछ। त्यो जस्तो अर्को स्थान छ, यो Beaver Meadows आगन्तुक केन्द्र जहाँ २० मिनेटको फिल्म देखाइन्छ र पार्कको टोपोग्राफिक नक्शा, साथै गिफ्ट शप र नि: शुल्क वाइफाइ छ।
अर्को दर्शक केन्द्र हो डाउनटाउन फल नदी र त्यहाँ एक ऐतिहासिक साइट होल्जवर्थ पनि छ जुन हामीलाई पछिल्लो शताब्दीको २० को दशकमा फिर्ता लैजान्छ, त्यस समयमा मानिसहरूले कसरी जीवन बिताउँथे भनेर। यहाँका भवनहरू ग्रीष्म openतुमा खुला छन्, तर जाडोमा तपाईं तिनीहरूलाई बाहिरबाट देख्न सक्नुहुनेछ। को Kawaneeche आगन्तुक केन्द्र, ग्रान्ड लेक गाउँको उत्तर, नक्शा, क्याम्पिंग परमिट, र पार्क को बारे मा प्रदर्शन प्रदान गर्दछ। को मोरेन पार्क डिस्कवरी सेन्टर यो भालु लेक रोडमा छ र यसले आफ्नै प्रदर्शनहरू र प्रकृति ट्रेल प्रदान गर्दछ जसले मोराईन पार्कको अद्भुत दृश्य प्रदान गर्दछ।
पार्कको भित्री भागमा वितरण गरिएका यी आगन्तुक केन्द्रहरू बाहेक, यात्रीले फरक फरक अनुसरण गर्न सक्दछन् प्राकृतिक मार्गहरू। यदि तपाईंलाई पहाडहरू मन पर्छ भने त्यहाँ छ ट्रेल रिज रोड, मिलरर पास पार गर्ने देशका सब भन्दा अग्लो उचाईमा पक्का सडक। त्यहाँ पनि छ पुरानो गिरावट नदी रोडजमिनको, जुलाईको सुरूदेखि सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्म खोल्नुहोस्, किनकि यसमा धेरै वक्रहरू छन्।
साथै त्यहाँ धेरै पिकनिक क्षेत्रहरू छन् र धेरै सम्भावनाहरू पैदल यात्रा, घोडा सवारी वा बाहिर निस्कनुहोस् शिविर र ताराहरूको मुनि सुत्नुहोस्। Kawuneeche उपत्यका हाइकल गर्न को लागी एक सुन्दर स्थान हो र जहाँ छ होल्जवर्थ ऐतिहासिक साइट र कोयोट ट्रेल। यो सबै पार्कको पश्चिम तर्फ हो। दुर्भाग्यवस यि धेरै ट्रेल्स २०१ 2013 को बाढीले ध्वस्त पारेको थियो त्यसैले पर्यटक केन्द्रहरूमा र लडाई जूता.
पार्क को पूर्व पक्ष मा छ भालु ताल क्षेत्र, धेरै सुन्दर पिकनिक स्पटहरू, ट्रेल्स र सहूलियत पोइन्टहरूको साथ। त्यहाँ गर्मी र गिरावट महिनामा एक नि: शुल्क बस छ। यहाँ लिली ताल छ यहाँ Longs पीक, एक ताल माछा मार्ने घाट, र परिवारहरु को लागी एक सजिलो ट्रेल को सुन्दर दृश्य संग।
त्यसकारण मूलत: रोकी माउन्टेन नेश्नल पार्कले विकल्पहरूको लागि प्रस्ताव गर्दछ ट्रेकिंग, दिनहरू बनभोज, तारांकित रातहरु भित्र पाँच शिविर क्षेत्रवा त्यो छ महिना अगाडि बुक गर्न सकिन्छ अग्रिम, बढी कडा शिविरहरूलाई पनि अनुमति छ, घोडसवारी दुई मेस्टेबलमा मेबाट खुला र पार्क बाहिर धेरै भन्दा बाहिर, माछा मार्ने यात्रा la० ताल र धेरै थप स्ट्रिमहरूमा, चरा हेर्ने र वन्यजन्तु, यी भूमिहरूको मानवीय व्यवसायको बारेमा जानकारी भएका आगन्तुक केन्द्रहरू र धेरै कार्यक्रमहरू जसले हुकूम दिन्छ लडाई जूता वा रेंजर।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » अमेरिका » संयुक्त राज्य अमेरिका » चट्टानी पहाडहरूमा यात्रा
Mycenae मा के हेर्ने